Milishaa naannoo Amhaaraa, Gondar, Sadaasa 8, 2020
Waggoota hedduuf biyya walitti bu’iinsa gosaan raafamaa jirtu Itiyooopiyaa keessatti loltoota mootummaa Itiyoopiyaa fi humnoota waraana naannoo gidduutti lolli baname kan boodanaa hamtuu ta’uu mala jechuun xiinxaltoonni yaaddoo qaban ibsaa jiran. Norway Oslotti kan argamu Yuniversitii Borknes profesora qorannaa nagaa fi walitti bu’iinsaa kan ta’an Kyeetil Tronvoll nuti qarqara waraansaa irra hin jirru, Itiyoopiyaan wal waraansa keessa jirti jedhan.
Walitti bu’iinsi Kaaba Itiyoopiyaa naannoo Tigraay keessatti kan uumame torban darbe loltoonni IWEHATf amanamoo ta’an maadhee waraana federaalaa haleeluu dhaan akka mootummaan jedhetti meeshaa waraanaa yaaluuf ennaa yaalanitti ture. Muummichi miinisteeraa Abiy Ahimedis hookkara sana dhaabsisuuf haleellaa samii irraan geggeessamu ajajaii loltoota gamasitti ergan.
Akka gabaasa dhiyeenya argametti lol asana keessatti namoonni dhibbaan laka’aman du’aniiru. Jalaba hookkara Sanaa irra tajaajilli interneetii kan cufame yoo ta’u xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo odeeffannoo argachuu akkasumas gargaarsa namoomaa barbaachisu xiinxaluuf rakkisaa ta’e.
Haalli Itiyoopiyaa keessaa haala hamtuu keessa waan jiruuf akka isa walitti bu’iinsa duraatti deebi’uun ulfaataa dha, adda addummaan jirus hidda gad fageeffate jedhu xiinxaltoonni. Walitti bu’iinsi sun daangaa Itiyoopiyaatti illee babal’acuu mala yaaddoo jedhu uumee jira. Hoogganaan dhaaba baqattootaa Sudan torban kana akka gabaasanitti baqattoonni 2,500 daangaa kan ce’an yoo ta’u dhibbaan kan laka’aman guyyaa guyyaatti gamana seenu jedhan.